कर्णालीमा माओवादीका शाही बाहिरिएर कांग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री, को हुन त शाही ? – Mission Khabar
कर्णालीमा माओवादीका शाही बाहिरिएर कांग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री, को हुन त शाही ?
मिसन खबर १६ कार्तिक २०७८, मंगलवार १३:१८
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेससँग भएको आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका शाही बाहिरिएर कांग्रेसका शाही सरकारको नेतृत्वमा आउने भएका हुन ।
गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत दिँदा विशेष सहमतिका आधारमा कांग्रेस र नेकपा एमाले माधवकुमार नेपालपक्षका चार जना सांसदले पार्टीको ह्वीप उलंघन गर्दै शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस तत्काल सरकारमा सहभागि भएको थिएन् । वैशाखमै माओवादीले कांग्रेससँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि दुई सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकास र दिनबन्दु श्रेष्ठलाई जलस्रोत तथा उर्जा तथा मन्त्री बनाइएको थियो । कांग्रेसलाई ६ महिनापछि शाहीले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छोड्ने र कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आन्तरिक सहमति कार्यान्वयन गरिएको गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।
को हुन् त जीवनबहादुर शाही
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीको जन्म हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ अन्तरर्गत खर्पेलगाउँमा वि.सं. २०२१ साल फागुन २० गते बुबा मानबहादुर शाही र आमा बेलकली शाहीको कोखबाट भएको हो । शाहीले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
३० देशको भ्रमण
शाहीले बिभिन्न ३० वटा देशको भ्रमण गरेका छन् । उनले अमेरिका, रुस, चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरल्याण्ड, स्पेन, बंगलादेशको भ्रमण गरेका छन् । यस्तै भुटान, मलेसिया, जोर्डन, इजरायल, इजिप्ट, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, जापान, ब्राजिल, कोलम्बिया, इण्डोनेसिया, सिंगापुर, नेदरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, पोल्याण्ड गरी ३० देशको भ्रमण गरेका छन् । उनले देशका ७७ वटै जिल्लाको भ्रमण समेत शाहीले गरेका छन् ।
तीन महिना जेल जीवन
२०४६ सालबाट नेपाली कांग्रेसमा भूमिगत भएका शाहीले त्यो बेला १५ दिन जेल जीवन बिताए। पछि २०६२÷०६३ मा तीन महिना जेलमा बिताएका थिए। संघको पूर्वमन्त्री समेत रहेका शाही हुम्ला (ख) बाट प्रदेशसभाको चुनावमा निर्वाचित भएका थिए ।
शाहीले पहिलो एजेण्डाकै रुपमा आफू मुख्यमन्त्री भएपछि ६ नम्बर प्रदेशको नाम फेरेर कर्णाली प्रदेश बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यो भइसकेको छ । सबै १० जिल्लामा सडक सञ्जाल जोड्ने चुनावी घोषणा पत्र बनाएका शाही आफै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर, उनको जिल्लामा अहिलेसम्म सडक पुग्न सकेको छैन् । बाटो, वन र जडीबुटी, विद्युतीकरण, बिचार र बजारीकरण नै प्रमुख एजेण्डा बनाएका शाही मुख्यमन्त्री भएपछि आफ्नो बाचा कति पूरा गर्लान यो भने समयक्रमसँगै आफै खुल्दै जानेछ ।